Ma sax baa sida ay dowladda hoose ee Xamar u wajahday nadaafadda iyo nalalka guryaha? – Kalfadhi
Waxaa la ii keenay waraaq ka soo baxday degmada aan deggenahay sida waraaqda ku cad waxaa ku saxiixan gudoomiyaha degmada.
Waraaqda waxaa ku qoran, in aan nadiifiyo gurigeyga bannaankiisa, weliba aan nal ku xiro, sidoo kale waxaa ku qoran amar ah in maalin kasta oo Khamiis ah aan ka qeybgalo nadaafadda xaafadda.
Dhibaatada ugu weyn ee Soomaalida heysata waxaa waaye in loo keeno qof aan dalka ama deegaanka xog-ogaal u aheyn, sidoo kale aanan kala garaneyn waxa shacabka laga rabo iyo waxa dowladda laga rabo.
Bil kasta waxaan bixiyaa lacag shan doolar ah oo nadaafad ah waxaa iga qaadda shirkad ay dowladdu ku naas nuujisay, sidoo kale waxaa ku xiran gurigeyga bannaankiisa nal aan aniga bixiyo lacagtiisa, anigoo aan amar dowlad ku fulin ee kaliya mugdiga diiddan.
Dowladda shaqadii laga rabay ayay shacabka ku khasbeysaa iyadoo moodda sharci.
Midda ah nadaafadda, iska dhaaf xaafadahee magaalada dhexdeeda ayay wasaq iyo ciid meel kasta yaallaan, marka toodi inay illaaween bay rabaan guryaheenna in ay na dhahaan nadiifiya.
Mida nalka ah ma jirto shirkad koronto oo ay dowladdu leedahay, waa shirkad gaar loo leeyahay marka sow lama rabin in dowladda ay shirkaddaas dhaqaalaha ka sameyneysa ku amarto in ay sakad kastaa hal ama labo nal galiso?
Midda ah in aan Khamiis kasta ka qeyb galo nadaafadda xaafada aaway dowladdi hoose iyo dhaqaalihii loogu talagalay in la siiyo dadka masaakiinta ah ee ka xoogsada?
Taas waxaa iiga sii daran shan qodob oo ganaax ah oo ka muuqda waraaqda [guriga la iigu keenay].
Qodobka 3aad waxaa ku qoran in sawir lagaa qaado kaddibna warbaahinta la geliyo adigoo lagugu eedeynaayo nadaafad xumo.
Bal ka warran qof la leeyahay waxaas sameey haddii kale warbaahinta ayaan kugu ceebeysaneynaa! Ma website-yadii dadka baadda ka qaadi jiray baa mise waa dowlad?
Kuma qorno hal qodob oo shacabka faraya in ay nabadda kala shaqeeyaan degmada oo xiriir joogto ah ay yeeshaan degmada iyo dadka deegaanka.
Aan kuugu daree minishiibiyada 24 saac jidka iyo suuqyada ayay qoryo la dhex taagan yihiin oo ay lacago canshuur ah ka aruuriyaan, haddii aad hal jiingad beddeleyso cunug AK-47 la xiimaayo ayaa kuu imaanaya oo lacag kaa rabo, haddii aad bixin weydana degmada ayaa lagu geynayaa oo lagu xirayaa waa marki aanan xabbad feeraha lagu galin!
Canshuurtaas intee la geeyaa maxaase lagu qabtaa?
Waxaa qoray: Bisle Xasan Maxamed
Dhexdhexaadnimada Soomaaliya ee khilaafka Carabta waa taariikh soo rogaal celisay